कैलाशको कुटी: 12/1/08 - 1/1/09
नयाँ वर्षमा नाम्चि महोत्सव घुमौ है
दक्षिण सिक्किमस्थित नाम्चिमा १६-१८ डिसेम्बरमा भएको सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय महोत्सबका केही दृश्यहरुद्वारा नयाँ वर्ष मनाउँने चाँजोपाँजो मिलाइदिनु भएको छ- दाजु रमेश राईले। नयाँ वर्ष २००९ को उपहार भनौ या शुभकामनास्वरुप उहाँले जानकारीसहित तस्बीरहरु कुटी र कुटीका आगन्तुकलाई दिनुभएको छ। हामी पनि उतै लागौँ भन्ने मेरो आग्रह छ। र, कुटीमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरुलाई नयाँ वर्ष २००९ को उपलक्ष्यमा मनभरिको शुभकामना।
खासगरी सिक्किममा ३ किसिमका जातीय समुदायहरु बसोबास गर्छन्- नेपाली, भुटिया र लेप्चा। भुटिया र लेप्चाबाहेक अन्य नेपाली मूलका जातजातीहरु (राई, गुरुङ, मगर, बाहुन, क्षेत्रीलगायत)'नेपाली' समूहमा पर्दछन्। त्यहाँको जनसंख्यालाई मोटामोटी ४ वटा समूहमा बाँडिएको छ।
a. अनुसूचित आदिवासी (Schedule Tribe)
b. अनुसूचित जाती (Schedule Caste)
c. अति पिछडिएका वर्ग (Most Backward Class- MBC)
d. अन्य पिछडिएका वर्ग (Other Backward Class- OBC)
माथिको अनुसूचित आदिवासी समूहमा 'भुटिया' र 'लेप्चा' पर्छन् भने अन्य ३ समूहमा 'नेपाली' पर्दछन्। भर्खरै लिम्बु र तामाङ जातीलाई भारतीय संविधानले 'अनुसूचित आदिवासी' (ST)मा समावेश गरेको छ।
अब भ्रमणमा लागौः
सामुहिक पहिचानको प्रतिरक्षा कि प्रभुत्वको खोजी?
नयाँ वर्षमा नेवारी भोजमा सामेल हुने हो कि?
लिम्बु समुदायको रीतिथितिको एक दृश्य।
लेप्चा जातीको सुन्दर घरमा relax गर्ने कि?
राई जातीको घर। राई जातीसँग जोडिएको खानाको परिकार 'वाचिप्पा/वासिम'(जसलाई 'तीते' पनि भनिन्छ)निकै नै प्रख्यात मानिन्छ। यो जाडोमा गज्जबको खान्की पो त हौ।
नेपालमा ल्होसारको रमझम अनि नाम्चि महोत्सबमा पनि चिटिक्कको गुरुङ जातीको घर।
लौ त, सन् २००८ लाई बिदाई अनि नयाँ सालको सम्पूर्ण कुरा थाप्लोमा राख्न तम्तयार पर्दै फेरीपनि सबैलाई शुभकामना। सबैको हरेक पल शुभ रहोस्। सबैको जय होस्।
Posted by कैलाश at 4:03 PM 14 comments Links to this post
Labels: घुमघाम, शुभकामना
विहानीपखको मेरो सपना
मेरो ठम्याइमा कहीँ कतै मोबाइलको घण्टी बजेको बज्यै छ। मोबाइल बोकेपछि त उठाउनु नि, के हेरेर बस्या होला भन्ने सोचेर म दिक्क छु। विस्तारै बिस्तारै मोबाइलको आवाज चर्को हुदै जान्छ। हुँदाहुँदा मेरै छेउमा कराउन थालेको भान हुन्छ। म निद्राबाट ब्युझिन्छु। ओछ्यान छेवैको टेबुलमा आफ्नै मोबाइल पो बजीरहेको पाउँछु। 'यो मध्य निद्रामा डिस्टर्ब गर्ने को?' अनि 'बल्ल बल्ल मजाले निदाकै बेलामा कराउँने यो ठाँडो' मनमनै मुर्मुरिदै बजीरहेको मोबाइललाई सिरानमुनी कोचिदिन्छु। अलिकति भएपनि त्यसको आवाज कम हुन्छ। आँखा खोल्नासाथ देखिनेगरी राखिएको भित्ते घडीतिर एकापट्टिको आँखा थोरै उघारेर चियाउँछु। (ब्युझिनासाथ कति बजेछ भनेर सामुन्नेको घडीमा आँखा लगाउनु नै मेरो पहिलो काम हो। त्यसैको लागि मैले नै त्यो घडीलाई त्यहाँ झुण्डाएको हुँ।) सात नाघीसकेको देख्छु। 'आऽऽऽ उठेर के नै लछरपाटो लगाउनु छ र यो जाडोमा' भन्ने सोच्दै झ्यालपट्टी फर्किन्छु। सिरकभित्र गुजुमुज्ज पर्दै झ्यालमा हेर्छु। बाहिरबाट उज्यालो भित्र छिरेकै छैन। त्यसले मेरो सुतुवापनलाई अझ ढाडस दियो। यसो ओल्लो कोठा पल्लो कोठाको चाल ठम्याउन खोज्छु। खासै चालचूल सुन्दिन। अहो! क्या मोज। जे होस् लोडसेडिङको कमाल। नत्र त एउटा कोठाबाट भजन, अर्को कोठाबाट हिन्दी गीत, अनि अर्कोबाट समाचार भनेको सुन्दै सुत्नुपर्ने हुन्थ्यो। रिल्याक्स पारामा तन्किए सिरकभित्रै। अनि मजा मान्दै पल्टिरहे ओछ्यानमै।
एक्कासी म सिरकबाट बाहिर निस्के। विद्युत प्राधिकरणको तालिकाअनुसार बिजुली बत्ती ज्यूँदै हुनुपर्छ भन्ने मनले म उठे। कामको तालमेल मिलाउँदै प्रत्येक सेकेण्डको हरहिसाब दिमागमा सेट गर्दैछु। बेलुकीको लोडसेडिङले खाना नखाइकन सुतेकोले होला निकै भोक पनि लागेको छ। हस्याङ र फस्याङ गर्दै सोझै राइस कुकरमा चामल खन्याउँछु- नधोईकनै। अनि अन गरिदिन्छु। ज्यादै जाडो छ। पानी हालेर इलेक्ट्रिक केट्ली पनि जोड्छु। केहीबेरमा पानी उम्लिन्छ। कफी बनाउँछु। किचन र्याक हेर्छु। खानेकुरा केही देख्दिन। लाइन भाको बेला पसल गएर केही किनमेल गर्नु त मुर्खता नै हो भन्दै कफीको सुरुपसँगै कम्प्यूटर खोल्छु।
तेस्रो पल्ट पनि डेटलाइन नाघ्न सफल एउटा रिसर्च आर्टिकलतिर ध्यान दिन्छु। लेख्नु भनेर दिमागले जोर दिइरहेको छ। तर पटक्कै मुड बन्दैन। घडी हेर्छु। ला! लाइन जान १ घण्टा २० मिनेट बाँकी छ। मन हतारिन्छ। मनमा ढ्याङ्ग्रो बज्छ। दिमागमा तनाव हुन थाल्छ। जसरी नि मैले आज यो आर्टिकल सक्नु छ भन्दै दिमागलाई तन्काउँछु। दिमागको जबर्जस्तीपनालाई बढावा दिँदै कनीकुथी एक प्यारा टाइप गर्छु। रुचि बिना जबरजस्ती मुखमा गाँस कोचेजस्तै। सरसर्ती पढ्छु। 'छ्या यस्तो पनि हुन्छ। फोकटीया तुकबिनाको, कही नभाको' पिटिक्कै चित्त बुझ्दैन। अनि डिलिट गर्छु। टाइप गर्न तम्तयार चिसिएका हातका औँला हेर्छु। बिनासित्तिमा यो जाडोमा के दुःख पाइरहेको हगि? यस्तै सोचेर टिठाउँछु। फेरी एकछिन कन्छु। दिमागलाई रगड्छु। अनि थोरै टाइप गर्छु। टाइप गरेको कुरा पढ्छु। एउटा वाक्यको सम्बन्ध अर्को वाक्यसँग के छ भन्ने नै बुझ्दिन म। यी बिना सम्बन्धको कुरा कसरी मेरो दिमागले सम्प्रेषण गर्दैछ भन्ने सोचेर म हैरान छु। फेरी सम्पादक तथा टिप्पणीकारलाई यस्ता वाक्यको अर्थ र अन्तरसम्बन्ध प्रष्ट्याउँनु कत्ति गाह्रो भनेदेखि। हत्तेरी। 'लोडसेडिङ हुँदा बिजुली बत्ती ज्यूदै अनि लोडसेडिङ नहुँदा चाहिँ बिजुली बत्ती मृत भनेझैँ' दिमागले बुझ्ने भए क्या मोज भन्दै सबैलाई डिलिट गर्छु। यही क्रम केहीबेर चल्छ। म आफैले आफैलाई 'कन्सन्ट्रेट, कन्सन्ट्रेट योर माइन्ड'भन्दै खबरदारी गर्दैछु। दिमागमा भने बिजुली बत्तीको मृत हुने बेला नजिकिएको कुराको गणित घुमेको छ। अनि समयमा काम नसक्नुको पीडा र अत्यासपना चाहि मनको कुनामा चेप्टिएको छ। बिजुली बत्ती मृत अवस्थामा पुगेपछि समयमा काम नसक्नुको पीडा बोकेर मौन धारण गर्छु सायद।
लेख्ने मुड बनाउँनलाई किताबको चाङबाट भर्खरै प्रकाशित भएको रिसर्च बेस्ड किताब निकालेर पल्टाउँछु। केहीबेर जथाभावी पल्टाउँदै पढ्छु। अनि मेरो लेखलाई मिल्ने विचार मनमा ल्याउन थाल्छु। दिमागमा कन्सेप्ट तयार पार्छु। अनि किबोर्डमा औँला राखेर टाइप गर्न थाल्छु। लेख्नलाई सजिलो महशुस हुन थाल्यो। बल्ल चित्त बुझ्ने गरी एक पेज टाइप गरीसके। चित्त बुझेपछि थप अरु पनि फुर्न थाल्यो। परीक्षा हलमा बसेको परिक्षार्थीझैँ खुरुखुरु लेख्दैछु भनौ न टाइप गर्दैछु। त्यत्तिकैमा यो दिमागको कुनचाहिँ तार हो कुन्नी तन्काएझैँ हुन्छ- सिरिङ्ग। किनकी झ्याप्पै बिजुली गयो। हरे!
यो बिजुलीबत्तीमा पूर्ण रुपमा निर्भर भएको दिनचर्या भोग्दै गरेको दिमागको तार नराम्ररी झट्कारियो। नाक-मुख-आँखा-निधार सबै एकैठाउँ कच्याककुचुक हुनेगरी नमिठोगरी अनुहार खुम्चाउँछु। एकैछिनपछि हतार हतार मनमा फुरेको कुरा कापीमै लेख्छु भनेर कापी र कलम खोज्छु। खोजेर लेख्न थाल्छु। एक प्याराग्राफ लेखीसक्दा आधाजसो शब्दहरु केरमेट गर्दै लेख्दै गरेको त्यो लेखाई पातबिनाको रुखमा रुपीले लाएको गुँड टाढैबाट प्रष्ट देखिएझैँ लाग्यो मलाई। 'आबुईऽऽऽ मेरो लेखाई' म आफै छक्क परे। कम्प्यूटरमा टाइप, डिलिट, अनडु, रिडु, कपी, पेस्ट गर्ने जति सबै भागमा रुपीको गुँड बनेछ गाँठे। कलम र कापी थन्काए। थाहा भएपनि मनको शान्तिको लागि अब कतिबेला बिजुली ब्युझिन्छ भनेर तालिका हेरे- साढे चार बजे। बरु गाउँमै आनन्दले मास्टरनी भएर बसेको भए के को बिजुलीबत्ती, के को यो गति भन्दै भुन्भुनिनु बाहेक के गर्छु र म?
तैपनि यो मनले कहाँ धर दिन्छ र! जे सुकै होस् कपीमा लेख्नै पर्यो भनेर शुरु गरे। जे जे मन लाग्छ सबै धस्काइदिए कापीभरि- डाक्टरी अक्षर पारेर। त्यसलाई चाहि पुनः पढ्ने काम गरिन्। किनकी त्यो डाक्टरी अक्षर म आफैले कनीकुथी गरेर बुझ्नुपर्ने स्थितिबारे म जानकार छु। अनि कम्प्यूटरमा जस्तो डिलिट गरेर पुनर्लेखन गर्ने न जाँगर छ म मा, न त त्यस्तो सुविधा नै। त्यो कापी बोकेर बिजुली बत्ती भएको ठाउँको खोजीमा साथीहरुलाई फोन गरे। त्यसैको चक्करमा मोबाइलमा भएको ब्यालेन्स सकाए मैले। तर बिजुली बत्तीसहितको काम गर्ने थलो फेला पारिन मैले। झ्याउ लाग्यो। दिमागमा पनि झ्याउ पलायो अनि त्यही झ्याउँसँगै केहीबेर म धुम्धुम्ती बसे- एक्लै।
यसरी दिनदिनै बेलाबेला जाने आउने भन्दा ३ दिन पुरै मृत अनि अरु दिन जिउँदै हुने बनाएमा बरु बेस् हुनेथियो भन्दै म झ्याउँ टक्टकाउँन कोठा बाहिर निस्के। सबै जना 'क्या बोर' भन्दै कोठाबाहिर निस्केर गफिने मेलो गर्दैरहेछन्। म पनि सामेल भए- रिफ्रेसमेन्टको खातिर।
'अब कतिबेला लाइन आउँछ?' एउटाले सोध्यो बिना सम्बोधन।
'साढे चारमा' मलाई नै सोधिएको नभएपनि मैले प्वाक्कै भनिहाले।
मेरीबास्सै यो सोध्ने र उत्तर दिने क्रम त तीब्र रुपमा जारी पो रह्यो त। बिजुली बत्ती गयो कि छिमेकीहरु म कहाँ आउँछन् र सोध्छन्- 'कैलाश बैनी, दिदी, आन्टी आज कतिबेला लाइन आउँछ?', 'आज आइतबार दिउँसो ४-८ बजेसम्म'। यसैगरी म प्रायलाई बारपिच्छेको तालिका बताइदिइरहन्छु र कोठाबाट भगाइरहन्छु। तैपनि सोध्ने बहानामा कोठामा आएर गफ गर्नेहरुको कमी हुँदैन। सबैलाई तालिका उपलब्ध गराउँने सोच बनाउँछु। सोच्दासोच्दै फेरी उही प्रश्न आउँछ मलाई। 'अब त आफै थाहा पाउनुस्। ई यो तालिका तपाईको आँखै अगाडी टाँस्नुस् अनि लाईनको सेक्रेटरी तपाई आफै बन्नुस्' भन्दै आफूसँग भएको तालिका दिएर पन्छाउँछु। केही महिनापछि त यो प्रश्नको नामनिसानै हरायो। किनकी सँधैलाई लोडसेडिङ। नो बिजुली नो किचकिच। अब त अगेनाको अगुल्ठोमा आगो छ छैन भन्ने पो सोध्न आउँन थाले।
एक्कैछिनमा फेरी ढोका ढक् ढक् गरेको आवाज आउँछ। मैले ढोका खोलिसक्दा पनि त्यो आवाज रोकिदैन। किनकी यो पल्ट साँच्चिकै ढोका ढक्ढकाइएको रहेछ।
'कैलाश, अझैसम्म उठ्या छैनस्? उठ्, आम्मामा। त सुतुवा काम लाग्दैनस्' दिदीले मलाई यस्तै के के भन्दै उठाउएर अफिस हिड्नुभो। म उठेर मुखै नधोईकन कफी बनाएर खान थाले। 'कैलाश बैनी, खाना पाक्यो? हेर्नु न लाइन गएर कस्तो दिक्क हगि? आज कतिखेर लाइन आउँछ' भन्दै छिमेकी कोठाको दिदी भित्र छिर्नुभो। सपनाको कुरा साकार हुँदै गएझैँ लाग्छ। फेरी एकाविहानै देखिएको सपना त पुग्छ भन्थे बूढापाकाहरुले। ठिकै हो कि क्याहो? हो क्यारा।
सिरानमा कोचेको मोबाइल निकालेर हेरे। ५ मिस कल र एउटा एसएमएस भेटे। हेर्दाहेर्दै मोबाइलको ब्याट्री सकेको सूचना दियो। आच्या! यो त सपनामा देखेकै थिइन त भन्दै हाँसे। मन बुझाउने मेलो गर्दै सोचे- आ, हाइ सन्चै भो। के था' यो बिद्युतीय संक्रमणकालको अवतरण कुन रुपमा र कुन मोडमा हुने हो?
Posted by कैलाश at 3:12 PM 11 comments Links to this post
मनकामना दर्शनको झझल्को
मनकामनाबाट हिमाल हेर्दाको दृश्य।
मनकामना माईसँग जोकिङ
केवुलकारबाट ओर्लेर मन्दिर पुग्ने उकालो चढियो । बाटैभरि फूलपाती लैजान अनुरोध गर्नेको ओइरो । एक व्यापारी एक विदेशी नागरिकलाई जबजस्ती फूलपाती थम्याइरहेको देखे । वास्तै नगरीकन अगाडि बढ्‍दै थिए उनीचाहिँ । मन्दिरमा उक्लिएपछि छेवैको पसलेसँग 'इट इस बेटर देन द राइस, कोकोनट एण्ड अल दिस थिङ्‍स्‍' भन्दै आफ्नै झोलाको साइट खल्तीबाट फुल निकालेर हातमा लिएर हामीभन्दा केही दुरी पछाडि लाइनमा उभिए । लाइनको के कुरा गर्नु र, अस्पताल र मन्दिरको लाइन कहिले पो सुकेको हुन्छ र? लामो लाइन र साह्रै चिसोको कारणले केहीबेरको लागि जुत्ता-चप्पलसँगै लाइन लागेका थियौँ सबैजना । जुत्ता-चप्पल निषेध गरिने ठाउँनेर पुग्न लागेपछि टुक्रुक्क बसेर तिनले जुत्ता खोले, मोजा पनि खोले, प्यान्ट पट्टाएर माथितिर फर्काए । पछाडि भिरेको झोलाबाट झिल्के पोलिथिन निकालेर जुत्ता चप्पल पोका पारे । पोका पारेको जुत्ता र मोजालाई पछाडि भिरेको झोलाभित्र राखे उनले सुरक्षितसँग । झोला एक छेउमा राखेर मन्दिरको कलाकृतितिर उनको आँखा तानियो । त्यत्तिकैमा हामी मन्दिर भित्र छिर्‍यौँ । केहीबेरमा मन्दिरको मूल ढोकाबाट बाहिरिदा त्यही ठूलो झोला उनकै ढाडमा थियो । भाईले कानैनेर मुख ल्याउँदै भन्यो- 'क्या जोकिङ्‍ भो दिदी',
'जुत्ता लगाएर भित्र जानु पो नहुनु त । झोलाभित्र राखेर निस्किनु त हुन्छ नि हैन?'
मन्दिर भित्र छिर्दा पालन गर्नुपर्ने बुँदागत नियमहरु लेखिएको चारपाटे टिनको प्लेट हाम्रो सामुन्ने टाँगिएको थियो । त्यसमा लेखिएको पहिलो बुँदा थियो- 'मन्दिर भित्र जुत्ता चप्पल लगाएर जान मनाही छ।'
विज्ञापनको बेजोड शैली
'ए हजुर यतातिर आउनुस्, माइतीमा जस्तै पकाएको लोकल कुखुराको मासु, शुद्ध घ्यू, बासमती चामल, बोटैको ताजा सुन्तला खुवाउछौँ'। थेप्चो नाक, खाइलाग्दो जीउडाल, बाटुलो मुहारधारी एकजना युवक । रेष्टुरेन्टको अघिल्लो भागमा बसेर श्लोक पढेझैँ एउटै गतिमा दर्शनार्थी तथा आगन्तुकहरुको ध्यान खिच्ने प्रयत्नमा मग्न थिए ।
'लौ हजुर यतातिर पाल्नुस्‍, ससुरालीमा जस्तै मिठो खाना, लोकल कुखुराको मासु, ....... खुवाउछौँ' आगन्तुकहरुको भीडमा देखिने महिला या पुरुषको बाहूल्यताको आधारमा माइती र ससुराली शब्द फेरबदल गर्दै एकोहोरो सम्बोधन गर्दै थिए उनी । बजार घुम्ने क्रममा थुप्रै पल्ट उही बाटोबाट ओहोरदोहोर गरियो । ती युवक उस्तै भाकामा, उही आसनमा बसेर, उही कुरा, उही रफ्तारमा बारम्बार दोहोर्‍याइरहेका थिए । मानौ, कुर्सीमा मान्छे हैन एउटा क्यासेट प्लेयर राखिएको छ । र क्यासेटलाई रिवाइन गर्दै प्ले गरिदैछ । खै, रेष्टुरेन्टतिर चियाउँदा मान्छेको चहलपहल चाहि खासै देखिएन । अनि त्यहाँभित्र मान्छे छिरेको पनि देखिएन । सायद आजकाल मान्छेहरुले ससुराली र माइतीको खाना भन्दा अरुतिरकै खाना मन पराउन थालेछन् क्यारे । तैपनि उही कुरा कति मजाले, पटकैपिच्छे स्वाद मानी मानी दोहोर्‍याउनमै मस्त थिए उनी । जे भए नि विज्ञापन गर्ने उनको त्यो शैली, हाउभाउ, लय पृथक लाग्यो मलाई ।
थोरै भूमिका लेख्छु
गत सोमबारको दिन आफन्तहरुसँग मनकामना दर्शन गर्न गइयो । त्यहाँ जानुको मेरो उद्देश्य मनकामना माईको मन्दिरभन्दा माथि लगभग १ घण्टाको पैदल दुरीमा रहेको लखन थापा गुफा र बक्रेश्वरी मन्दिर पुग्नु पनि रहेको थियो । मेरो त्यो उद्देश्य यो पल्ट पुरा हुन सकेन । त्यसैले तत्काल ब्लगमा हालुँ हालुँ लाग्ने कुरा भेटिन जस्तो लाग्यो । त्यहाँबाट फर्किएपछि कोठामा कुरा चल्यो । त्यही बेला माथि उल्लेख गरेको कुरालाई स-दृश्य स्मरण गरे । तब म मनमनै हाँस्न थाले । र छोटो नोट लेखेर राखे । त्यही साँझ दीलिपजीले मनकामनाको यात्राबारेमा ब्लगद्वारा थाहा पाउने कामना गर्नुभएको थियो । तैपनि मलाई यो टाँसो हालुँ भन्ने लागेन । हिजै बेलुकी लोड सेडिङको फाइदा छोप्दै एकजना साथीसँग मैतीदेवी मन्दिरतिर डुल्दै पुग्यौँ । त्यहाँको दृश्य देख्दा पुन: मलाई मनकामनाको त्यही दृश्यको झझल्को आयो । साथीलाई बेलीबिस्तार लगाए । ऊ मरि मरि हाँस्यो । अनि मनमनै सोचे यही कुरा ब्लगमा ठेल्दिन्छु ।
Posted by कैलाश at 11:27 AM 14 comments Links to this post
११ डिसेम्बर ०८ (२६ मंसीर ०६५) यानी कि भोलीदेखि 'अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय चलचित्र महोत्सव २००८' काठमाडौमा शुरु हुँदैछ। सो महोत्सवको उदघाटनको अवसरमा प्रदर्शन हुने तथा महोत्सवमा अन्तर्राष्ट्रिय समूहमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ 'थ्रेसहोल्ड'। तथ्याङ्क संकलन गर्ने क्रममा पुगेकी आधुनिक संस्कारसँगै चल्दै गरेकी महिला र स्थानीय संस्कारमा जीवनयापन गरिरहेकी महिलाबीचको संवादबाट वृत्तचित्र अघि बढ्छ। कुराकानीको क्रममा पारिवारिक तथा व्यक्तिगत स्थिति र मनस्थितिको खुलासा हुँदै गएपछि यी दुबै पात्रबीचको पारस्परिक सम्बन्धको अदृश्य जालो बन्छ। एकजना परम्परागत सामाजिक सांस्कृतिक बन्धनबाट पीडित महिला र अर्को त्यसभन्दा माथि उठेको तैपनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको खातिर आधुनिक परिवेशमा लडीरहेको महिलाबीचको पीडाको मात्रा फरक छ । तर पहिलो भेटमै पीडा र बाध्यताले जन्माएको एकैप्रकारको अनुभूतिको सम्बन्ध स्थापित हुन्छ। त्यही सम्बन्धकै आधारमा भित्री अचेतन मनमा दबेर रहेको विद्रोहले बाहिर चियाउँछ। अन्तिममा गएर विद्रोहको प्रष्फूटन हुन्छ र वृत्तचित्र सकिन्छ।
सर्जकद्वय दीपक रौनियार र आशा मगरातीले यस बृत्तचित्रमार्फत नेपाली महिलाको पीडालाई तीखो यथार्थको रुपमा उनेका छन्। एउटा संघार नाघेपनि फेरीपनि अर्को संघारभित्रै थुनिन बाध्य नेपाली महिलाहरुको अघिल्तिर त्यस्ता अनगिन्ती संघारहरु पाइलैपिच्छे रहेको यथार्थलाई हामी नकार्न सक्दैनौ। हाम्रो समाजमा जुनसुकै भेगका महिला कुनै न कुनै पक्षबाट थिचिएकै हुन्छन् भन्ने कुरा थ्रेसहोल्डले देखाएको छ। थिचोमिचोको किसिम र माध्यम फरक हुनसक्छ, परिवेश र प्रकृति फरक हुनसक्छ तर लैङ्गिक रुपमा हेर्दा एउटी महिला नै थिचिएकी हुन्छे। फरक फरक परिवेश र रहनसहनको दुई महिला पात्रको पीडाको जड एउटै छ। यस बृत्तचित्रको दुई नारी पात्रहरुको कथाव्यथा र परिवेशले यही कुरा देखाएको छ।
मुख्य पात्र मधेस/तराईमूलकी परम्परागत संस्कारमा बाँधिएकी एक महिला जो आफ्नो नामले हैन आफ्नो जन्मगाउँको नामले परिचित छे। त्यसबाहेक उ आफ्नो लोग्नेकै लागि अस्तित्वमा आएकी छे र उसैको पहिचानमा उभिएकी छे। जसको आफ्नो बेग्लै पहिचान र अस्तित्वको नामनिशान छैन। उ यस्तो एउटी नारी हो, जसले कसैको श्रीमति र कसैको आमा हुनुमै आफ्नो अस्तित्वलाई सीमित राखेकी छे। कुनै पनि खालको निर्णय र स्वतन्त्र रुपमा कामकाज गर्ने अधिकारबाट बञ्चित छे। लोग्नेकै खातिर आफूभित्र रहेको क्षमता, कला, आकांक्षाको घाँटी निमोट्न बाध्य छे। पढ्ने रहर हुँदाहुँदै पनि विहे गरेपछि पढाई छाडेकी छे। घरको दैलो नाघेर पसल सम्म जाने निर्णय समेत श्रीमान्‌को स्वीकृतिबिना गर्न सक्दिन। अर्को पात्र, शिक्षित र स्वयं निर्णय गर्न सक्ने पहाडी मूलकी सक्षम महिला छे। जो आफ्नो स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानको लागि नचाहदा नचाहदै पनि लोग्नेसँग पारपाचुके गरेर अघि बढिरहेकी छे। जसको आधुनिक र स्वतन्त्र जीवनशैली, आत्मविश्वासपूर्ण व्यवहारले अनभिज्ञ रुपमा मुख्य पात्रलाई प्रभाव परिरहेको हुन्छ। त्यही प्रभावस्वरुप श्रीमान‌्‌को इच्छा आफूमा लाद्‌ने प्रवृत्ति विरुद्ध विद्रोह गर्ने पहिलो कदम चाल्छे। र एउटा संघार नाघेर अर्को चरणको संघारको घेराभित्रै थुनिन पुग्छे। यसरी यी दुई भिन्नभिन्न पीडित पात्रबीचको संवाद र पीडाकै सेरोफेरोलाई बृत्तचित्रले सटिक रुपमा उठाएको छ।
यो बृत्तचित्रको कथाबस्तु निकै नै गहकिलो र चोटिलो छ। प्रस्तुतीको हिसाबले पनि निकै नै राम्रो लाग्छ। यद्यपि कता कता दृश्य नमिलेझै लाग्ने र कतै कतै निकै वेगमा कथा दौडिएको अनुभव हुन्छ। साथै कथावस्तु अनुरुपको संवाद नभएको हो कि भन्ने पनि भान हुन्छ। तराई/मधेस भेगका महिलाहरुले लोग्नेको नाम मुखबाट उच्चारण नगर्ने परम्पराबारे ज्ञान हुँदाहुँदै बारम्बार त्यही कुरा सोधीरहनु, बारम्बार सोध्दाखेरी पनि नबोल्दा सोधाईबाट दिक्क भएको पात्र भन्दा सोध्ने पात्रको अनुहारमा आक्रोस देखिनु केही नमिलेझैँ लाग्छ। उता सोधाईबाट दिक्क भएर श्रीमान्‌को नाम लेख्दा अगेनामा बसालेको चामल डढ्न पुग्छ र हतासमा हात समेत पोल्छ। सोधाईको झर्को र हात पोल्दाको पीडाको आक्रोश नदेखिनु अनौठो लाग्छ। पोलेको हातको पीडा कम पारिदिइसकेपछि बल्ल 'श्रीमान्‌को नाम लिनुहुन्न भन्ने तपाईलाई थाहा छैन' भन्ने शान्त स्वभावको संवादले बाहिरी पात्रको महत्वलाई बढी नै जोड दिइएको हो कि भन्ने देखाउँछ। बाहिरबाट गएको पात्रसँगको छोटो कुराकानीमै मुख्य पात्र अधिक रुपमा प्रभावित हुनु र आफैभित्र विद्रोह उत्पन्न हुन पुग्दा वेगमा कथा दौडिएझैँ लाग्छ। यद्यपि सामाजिक रुपमा असल र मायालु पात्रकै रुपमा श्रीमान्‌को चित्रण गरिएको छ।
कथाको अन्त्यमा महिलाले आफ्नो थुप्रै बाध्यता र पीडालाई पोख्दै श्रीमान्‌को कुरा नटेरी ओछ्यान छाडेर 'सुत्न हिडे' भन्दै कोठाबाट बाहिरिन्छे। यसअघि चरणबद्ध रुपमा विद्रोह गरेपनि अन्तिममा देखाइएको विद्रोहले दोहोरो अर्थ बोकेको छ। शुरुदेखिको कथाबस्तुको उनाईको आधारमा त्यो बिद्रोह आफ्नो इच्छा विपरितको काम गर्नलाई नकार्नु र आफू हुनुको बोध स्वयंले अनुभूत गर्नु हो भन्ने बुझिन्छ। अर्को अर्थमा, एउटी महिलाले श्रीमान्‌ले चाहेको खण्डमा जुनसुकै अवस्थामा पनि यौनइच्छा तृप्त गर्नुपर्ने बाध्यतालाई नकारेको देखिन्छ। नेपाली समाजको श्रीमान्‌श्रीमतिको सम्बन्धको मुख्य कडी मानिने यौनको विषयवस्तुलाई पनि जोड्दा महिलालाई थप विद्रोही देखाउन सघाएको छ। साथै सामाजिक मान्यताको आडमा श्रीमान्‌श्रीमतिको सम्बन्धमा लुकेर रहेको यौनसम्बन्धी पीडा र बाध्यतालाई पनि उदाङ्गो पारेको छ। यद्यपि यहि अन्तिमको दृश्यलाई मात्रै जोड दिएर एकांकी रुपमा बुझिएको खण्डमा सम्पूर्ण वृत्तचित्रको कथासारभन्दा फरक अर्थ निकाल्न सकिने दिशा पनि प्रदान गरेको छ।
नेपाली चलचित्रमा महिलाको वास्तविक अवस्थाको चित्रण गरी थ्रेसहोल्डमार्फत देखा परेका छन्- युवा चलचित्रकर्मी दीपक रौनियार। वृत्तचित्रमा पात्रहरुको अभिनय शसक्त देखिन्छ। खासगरी आशा मगराती (जो आगन्तुक महिलाको भूमिकामा देखिएकी छिन्)र स्थानीय कलाकार रञ्जु झाको अभिनय प्रसंशायोग्य देखिन्छ। सगोलमा भन्नुपर्दा दर्शकको मन छुने र वृत्तचित्र हेरिसकेपछि एकपल्ट सबैले सोच्नैपर्ने अवस्था सृजना गर्न सक्षम, नेपालीपन र नेपाली कथावस्तु उधिनेर अगाडी देखा परेको दाबी गर्न सकिने ठाउँ दिन सफल छ यो बृत्तचित्र।
हाम्रो प्रेमको भाषा शब्दमा लेखे
तिमीलाई सम्बोधन गर्दा 'ए' नजोडीकन चित्तै बुझ्दैन । अनि तिमीबाटै मेरो हरेक कामको शुरुआत र अन्त्य पनि नभई हुँदै हुन्न। खै, मनमा हुडालिएको असीमित भावनालाई कुन शब्दले व्यक्त गरुँ यहाँ? म सँग त्यो शब्द नै छैन। म परदेश फर्केपछि त्यस्तो शब्दको खोजी गरी नै रहेको छु। जसले मेरो मनमा चाङ लागेको अथाह प्रेम र मायालाई हुबहू व्यक्त गरोस्। तर त्यस्तो गर्नै सकिरहेको छुइन सिम्मा। के गर्नु, यो मन न हो कहाँ मान्छ र। थोरै भएपनि मन बुझाउन, तिम्रै खातिर, तिम्रै सहारामा टुसाएर झाँगिएका यी भावनाको एक छेउ मात्रै पनि छुवाउने कोशीसमा यो डायरी लेख्दैछु। तिमीसँग भेटेपछिका हरेकपल उब्जिने भावनाको मूल तिमी नै हौ नि सिम्मा । मूल भएपछि भावनाको बाढी कहाँ रोकिन्छ र?
हेर न सिम्मा, तिमी कहाँ थियौँ, म कहाँ थिएँ। तिमी को थियौँ, म को थिएँ। संयोजले हाम्रो भेट भयो। यहि नै मेरो जीवनको पहिलो पल हो। जसले जीवनमा खुशीयाली लिएर आयो। तिमी, अनि म, हामी भयौँ। यो सबै सम्झँदा बेग्लै खालको मिठो अनुभूति हुन्छ मलाई। लाग्छ स्वर्ग नै पाएँ। सृष्टिमा यो पनि एउटा अद्‍भूत काम त हो नि। हैन र सिम्मा? तिमीलाई त्यस्तो लाग्दैन? पक्कै पनि लाग्छ नि हगि? म एउटा संघर्षरत परदेशी। एक्कासी मेरो जीवनमा तिमी पनि संघर्ष गर्न सामेल भयौँ। अनि एकाध महिनाको समयमा मैले पुरै संसार भोगे। तिमी भेट्‍नासाथ मेरो जीवनमा बसन्त छायो। बसन्तको रमझममा सर्वाङ्ग रुपमा मनको ढोका खोलेर तिमीलाई भित्र आउने निम्तो दिए। निम्तो स्विकार्दै मेरो मनको गहिरार्इभित्र तिमीले चियाई हेर्यौ। तिमीसँग आँखा जुध्नासाथ तिम्रो हरेक सास फेराईमै म जीवित भएको महशुश गरे। तिमीलाई भेटेर म यति अधैर्य भए सिम्मा। तिमी नदेख्दा अरु हेर्ने चाहै रहेन। तिम्रो बारेमा नसोच्नुभन्दा होसमै रहन मन लागेन। तिमीलाई साथ दिने हतारमा तिम्रो स्विकृतिको खाँचै महशुश गरिन।
तिमीलाई सोच्ने समय दिनुपर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि म स्वार्थी बने। थाहै नपाई तिम्रो प्रेमको कसिलो बन्धनमा यसरी बाँधिन पुगेछु, त्यो बन्धनमा तिम्रो स्विकृति नलिइकनै अनगिन्ती सपनाका बीउहरु यत्रतत्र छरे। तिमी बिनाको मेरो अस्तित्व नै विलाइसकेको थियो। दुई दिन, सिफ दुई दिन तिमीले सोच्ने समय माग्यौँ। यही नै थियो तिमीले मसँग बोलेको पहिलो बोली। त्यही बेला तिमी बाहेक अरुले मलाई बुझ्नै सक्दैन भन्ने विश्वास भयो मलाई। तैपनि दुई दिनको तिम्रो मौनताले मैले फेर्ने हरेक सास समेत मेरो लागि धारिलो हतियार सावित भएको थियो। आफ्नै सास फेराईले मन्द गतिमा तड्‍पाइ तड्‍पाइकन चिरा चिरा पार्दै छताछुल्ला पारिरहेको थियो। दुईदिनपछि तिमीले मलाई सुम्सुम्याइकनै समेट्‍नेछ्‍यौ भन्ने विश्वासले म निर्धक्क भएर अझै छताछुल्ल हुन तयार थिए। बस्, तिम्रो एक मायालु शब्दसहितको स्विकारोक्तिको लागि आफ्नै मनस्थितिभित्रको अनगिन्ती नर्कसँग जुध्दै थिए म।
तिम्रो सहमतिको पर्खाइमा मेरो शरिर अनेकौ सोचाईहरु जेलिदै गएर आँख्ला आँख्लाबाट बग्रेल्ती चिचिला पलाउदै गरेको बलियो थाक्रो बनेको थियो। तर मन मस्तिष्कले भावना र सोचाईको प्वाख लगाएर सारा ब्राम्हाण्डलाई अनगिन्ती चक्कर काटेको काटेकै थियो। तिमीले त्यो उडानलाई अझ गति दियौ। तिम्रो स्विकृतिमा मुन्टो हल्लिनासाथ कान्तिमय बगैचाको निर्माण भयो । हुन पनि केही नबोलीकनै, केही नगरीकनै तिमीले मेरो कण कणलाई यत्ति मिठोगरी पगाल्यौ। आफूभित्रै समाहित गर्‍यौ। म र मेरो हरेक पक्षलाई यस्तरी आत्मियतामा कस्यौँ कि म तिमीभित्रै बिलाए। तिमीलाई याद छ सिम्मा? किन नुहुन होला र? नहुने कारणै छैन। 'कहिल्यै बिर्सेको भए पो याद गर्नलाई' अहिले पनि तिमी यसै भन्दैछौ मेरो कानैमा खसुक्क।
पहिलोपल्ट तिमी र म परिवारकै मञ्जुरीमा भेटेका थियौँ तिम्रै घरमा। केहीबेरको थोरै तर साह्रै मिठासपूर्ण संवादपछि म तिम्रो आडैमा बस्ने अनुमति माग्दैथिए- मौन रुपमै। तिमीले पनि समर्थन दियौँ मौनतामै। मौनताकै संवादमा हामी निकै गहिरिएर एक अर्काको भावना बुझ्न अभ्यस्त थियौँ। कहिले तिमी मलाई पुलुक्क हेर्थ्यो कहिले अन्तै हेरेझैँ गर्थ्यौ। कहिले नहेरीकनै मनमनै मुस्कुराउथ्यौँ। तैपनि तिम्रो मुस्कुराहट म प्रष्टै देख्थे। कहिले केही धकाएझैँ देखिन्थ्यौ। कहिले मनमा भएको कुरा भन्न खोजेझैँ देखिन्थ्यौँ। तिमीभित्रको कुरा शब्दमा सुन्नुभन्दा अनुहार र आँखाको भाकामै छल्किएको अति प्रिय र अदभूत थियो। 'तपाई'को सम्बोधनले तिम्रो मौनतालाई भंग गरेको थियो। तिमीलाई 'तिमी' भनेकै खूब मन पर्ने हगि? तर मलाई चाहि 'तपाई' नै भन्नुपर्ने तिम्रो जिद्दी पनि अचम्मको थियो। तर साह्रै मायालु थियो- भुतुक्कै पार्ने खालको।
मैले यो कुरा तिमीलाई मौन रुपमै भनीसके धेरैपल्ट। तिमीले पनि भनेकै हौ। फेरीपनि म भन्दैछु- तिमीलाई हृदयदेखिको आभार सुम्पन्छु सिम्मा। किनकी तिमीले मौनताभित्रैको आवाजलाई सही ढंगले बुझ्ने सामर्थ्य प्रदान गर्यौ। माया प्रेमको गहिराईसँग चिनायौँ र तैरिदै मजा लिन पनि सक्षम बनायौ। 'म' हुनुको बोध गरायौँ। 'तिमी' हुनुको महत्व सम्झायौँ। 'हामी' हुनुको सन्तुष्टी दिलायौँ। शब्दको मिठास एक छेउमा थन्क्याएरै आफ्नो ढुकढुकीको प्रत्येक भाका बुझ्ने मौका दियौँ। सबैभन्दा ठूलो कुरा जीवनको गन्तव्य र सार्थकतालाई औँल्याइदियौँ। यी सबै हाम्रो पहिलो भेटको मौन संवादले दिएको उपहार हुन् सिम्मा।
हाम्रो दोस्रो भेट मेरो (मेरो भन्नु पटक्कै मन छैन अहिले। तैपनि त्यसबेला 'हाम्रो' भन्ने पूर्ण स्विकृति दिएको थिएनौँ तिमीले) घरमा भयो। त्यस दिन पनि हामी धेरै बेरसम्म एकअर्कासँग मौनताकै संवादमा भिज्यौँ। त्यस संवादमा मैले भन्दा तिमीले नै बढी माया गर्छौ मलाई भन्ने विश्वास जाग्यो। थोरै संवादमा तिम्रो विचार र मेरो विचार कत्ति मेल खादो रहेछ भन्ने भेद खुले। हुन त तिमी सधै भन्ने गर्छौ नि सिम्मा 'तपाईले नै बढी माया गर्नुहुन्छ मलाई'। यसरी नै त हाम्रो मायाको पोयो दोहोरो रुपमा बाट्‍दै जाँदा मजबुत भयो (यो पनि तिम्रै शब्द हो सिम्मा। हेर न तिमीबिना म एक पाइला पनि मजाले सार्न सक्दिन हगि?)। अनि 'हामी एकअर्काकै लागि बनेका हौ' भन्ने कुराप्रति शतप्रतिशत विश्वास जाग्यो हामी दुबैलाई।
त्यसबेलाका हरेक पल कहिल्यै मर्दैनन् सिम्मा। म आनन्दले मात्तिदै तिम्रै काखमा टाउको राखेर तिमी मुस्काएको हेरीरहन्थे। तिमी'नि शान्तसँग आनन्द लिदै मलाई मात्तिमा थप मद्दत गर्थ्यौ। तिम्रो भित्री सुन्दरता र सौहार्दता तिम्रो आँखामा छर्लङ्ग देख्थे म। आँखाको भावबाटै एकअर्काको भावना पढ्‍दै थियौँ। तैपनि तिमीले नै पहिले सोध्यौँ मलाई 'तपाई खुशी हुनुहुन्छ नि हैन?'। 'म जत्तिको खुशी अरु कोही देख्यौँ र सिम्मा?' भन्ने मेरो वाक्यले तिम्रो मुहारमा छरिएको ज्योति मेरो आँखैमा बसेको छ। त्यसबखत शान्त तलाउबीच फक्रेको कमलको सेतो र सफा फुलझैँ देखियौँ। फूलमाथि परेको विहानीको शीतको थोपालाई घामको पहिलो किरणले स्पर्श गरेझैँ तिम्रो सुकोमल ओठमा थप मादकता छायो- औद्यी सुन्दर। तत्कालै तिमीलाई मायालु चुम्बनको उपहार टक्र्याउने हुट्‍हुटी जाग्यो। तैपनि मलाई विश्वास थियो तिम्रो बुझाइप्रति।
तिमी मेरो आँखाको भाव पढ्न खप्पिस भइसकेको थियौँ। 'ए सिम्मा, तिमी नि खुशी छ्‍यौ?' भनेर मैले सोधे। ठूल्ठूला आँखाको इशारासँगै चिटिक्क परेको नाक थोरै खुम्च्याएझैँ गर्दै 'धेऽऽऽऽरै खुशी छु' भनेर हाम्रा जोडिएका औँलाहरु मुक्त गर्‍यौँ। मैले तिम्रो आँखामा हेर्दै प्रश्न गरे। प्रतिउत्तर स्वरुप तिमीले दुबै हातले गाला सुम्सुमाउदै निधारमा चुम्यौँ। त्यो क्षण अर्कै संसारमा पुग्यौँ हामी। बेलाबेलामा हुने सटिक र मिठासपूर्ण बोलीपश्चात पुनः हामी मौन संवादमै फर्कन्थ्यौँ। 'हामी' सँगै हुनुको असिम आनन्द, तिमीले चुमेको त्यो क्षण, तिम्रो स्पर्शको मिठो अनुभूति म बयान गर्नै सक्दिन सिम्मा। सिर्फ मौनताकै भाषामा व्यक्त गर्न सक्छु। उस्तै गरी, जसरी हामीले मौन रुपमै संवाद गर्ने गरेका थियौँ। अहिले सक्छ्‍यौ भने तिमीले नै शब्दमा बयान गर न। त्यसो गर्यौ भने हामी असिम आनन्दको अर्को उचाईमा उक्लिन्छौँ। अहिले पनि एकअर्काको मौनताको भाव भालीभाँती बुझ्छौ। तर पनि बोल्न र लेख्न बाध्य छौँ हामी दुवै। त्यसैले पनि म यो डायरी लेख्नको लागि शब्द खोज्दै उन्न लालायित छु सिम्मा। यसमा कतिपय तिम्रो शब्द सुटुक्क चोरेर लेखे। कतिपय तिम्रो प्रतिबिम्बको सट्टा लेखे। कुनै तिम्रो अभावले शब्द बने। कुनै तिम्रो अथाह मायाले सृजना भए। कुनै शब्द तिमीप्रतिको मेरो मायाले जन्मायो। मैले लखे। तर हरेक शब्दमा तिम्रो अधिकार छ भन्नेमा कुनै सन्देह छैन। केही उपाय नलागेर हाम्रो प्रेमको मौन संवादलाई शब्द खोजीखोजी यतिसम्म लेखे।
ए सिऽऽऽम्मा... सिऽऽऽम्मा, यी सबै हाम्रो जीवनको स्वर्णिम आनन्दको चरमउत्कर्षको उत्तम पल हुन्। हाम्री जीवनको सबैभन्दा स्वर्णिम पल।
आजलाई म परदेशीको डायरी यत्तिमै थन्क्याउँदैछु।
५ डिसेम्बर, २००८ (२०६५ मंसीर २०)
Posted by कैलाश at 5:09 PM 10 comments Links to this post
Labels: परदेशीको डायरी